Kedu ihe bụ ụkọ mmiri na mmetụta dị a doesaa ka ọ na-eweta? | Network Meteorology
Anyị anụla ọtụtụ ihe gbasara ya unwu, okwu nke, ka ụwa na-ekpokwu ọkụ, anyị na-ejikarị ya eme ihe n’ebe mmiri ozuzo na-adị ụkọ. Ma gịnị ka ọ pụtara n'ezie na mpaghara ụfọdụ na-enwe nsogbu ụkọ mmiri ozuzo? Olee mmetụta ndị a bụ ihe ndị na-esi na ya apụta?
Ka anyi tulee n’ime okwu a nwere ike imetụta anyi niile.
1 Gịnị bụ ọkọchị?
2 Kedu ụdị ndị enwere?
3 Nso idi utịp?
4 Ebee ka a kacha nwee ọkọchị?
Gịnị bụ ọkọchị?
Ọ bụ transitory climatological anomaly nke mmiri na-ezughị ezitekwara mkpa nke osisi na anụmanụ, gụnyere ụmụ mmadụ, ndị bi n'otu ebe a. Ọ bụ ihe ịtụnanya na - akpata enweghị mmiri ozuzo, nke nwere ike ibute oke mmiri.
E nwere ụdị atọ, nke bụ:
Ọnọdụ ụkọ mmiri: ọ na - eme ma ọ bụrụ na mmiri anaghị ezo - ma ọ bụ mmiri na - ezo ntakịrị - oge ụfọdụ.
Unwu ala oru ubi: na-emetụta mmepụta nke ihe ubi na mpaghara ahụ. Ihe na-ebutekarị ya bụ enweghị mmiri ozuzo, mana ọ nwere ike ibute site na ọrụ ubi akọghị nke ọma.
Mmiri mmiri: ọ na - eme mgbe mmiri mmiri dịnụ dị n'okpuru nkezi. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ bụ enweghị mmiri ozuzo kpatara ya, mana ụmụ mmadụ na-ebutekarị ọrụ, dị ka o mere na Aral Sea.
Nso idi utịp?
Mmiri bụ ihe dị mkpa maka ndụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, ọ bụrụ na unwu ahụ dị oke ike ma ọ bụ na-adịgide adịgide, nsonaazụ ya nwere ike ịnwụ. Ihe kachasị mma bụ:
Erighị nri na-edozi ahụ na akpịrị ịkpọ nkụ.
Mmebi na ebe obibi, nke na-emetụta ụmụ anụmanụ n'ụzọ na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe.
Oké ifufe, mgbe ọ mere na mpaghara nke ọzara na mbuze.
Agha na-alụ ọgụ maka akụ sitere n'okike.
Ebee ka a kacha nwee ọkọchị?
Mpaghara emetụtara bụ nke ndị Mpi nke africa, ma oké ọkọchị na-ata ahụhụ na Mpaghara Mediterraneanna California, Peru, na n'ime Queensland (Australia), n'etiti ndị ọzọ.
Oké unwu, ya mere, bu otu n’ime ihe ndi kacha enye anyi nsogbu n’ime uwa. Naanị site n'iji mmiri nke ọma ka anyị ga-ezere ịta ahụhụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Kedu ihe bụ ụkọ mmiri na mmetụta dị a doesaa ka ọ na-eweta?
Fall 2016 ịmata ihe